Naqshadeynta Websaydhka: Habka Loo Abuuro Beddelaad Websaydh Badan | Martech Zone
Naqshadeynta Websaydhka: Habka loo Abuuro Beddelaad Websaydh badan
Jimco, Nofeembar 16, 2018 Jimco, Nofeembar 16, 2018 Ashley Marsh
Miyaad hadda bilowday ganacsi oo aad ku hammiyeysaa inaad ku kobciso xawaare iftiin leh? In kastoo, yeelashada fikrad rajo leh iyo wax soo saar tayo fiican leh kuma filna inay macaamiisha wax ka qabtaan. .
Websaydh Lagu Kordhiyo Iibinta Ganacsigaaga
Adduunkan tiknoolajiyada, si loo gaadho millennials-ka horumarinta degelku waa lagama maarmaan. Tani kaliya kuma caawinayso calaamadeynta meheraddaada sidoo kale waxay siinaysaa qiime macaamiisha.
Maxaad saacado u sugeysaa in macmiilku u soo dago shirkaddaada, adoo awoodi kara inaad tiro badan isla mar wada hesho? Dhisida websaydhku kharash badan kuguma bixin, waxaad ka walwalsan tahay laakiin waxay hubaal tahay inay ganacsigaaga gaadhsiin doonaan heerar sare. Adoo adeegsanaya degel sifiican u horumarsan, waxaad bartilmaameedsan kartaa suuqaaga gaarka ah. Sidaa darteed, waxaan halkan ku wadaagi doonnaa waxtarrada naqshadeynta Websaydhka kaas oo kobcin doona ganacsigaaga.
Waqtiga & Tamarta Keydiyaha: U bandhigida alaabtaada macmiilka oo aad iska tagto adigoon iibin waa niyad jab weyn. Dhisida degel kuu gaar ah ayaa macaamiisha ka caawin doonta inay hubiyaan badeecada isla markaana ay amarka dhigaan iyadoon wax dhib ah la arkin.
Aqoonsiga Astaantaada: Dhisida degel waxay gacan ka geysan doontaa gaaritaanka astaantaada macaamiil aad iyo aad u tiro badan. Sidoo kale, launchers cusub, iyo sidoo kale qiimo dhimis aad siiso macaamiisha, waa lasoo bandhigi karaa.
Dhexdhexaad si loo qabto macaamiil badan: Websaydh soo jiidasho leh ayaa ka heli doonta taraafik badan. Websaydhka Dynamic wuxuu ka caawiyaa beddelaad badan daacadnimo iyo u diritaanka meheraddaada. Macaamiisha ayaa awoodi doona inay hubiyaan qiimaha iyo casriyeynta ogeysiinta ku dadaalaysa sumcaddaada ganacsi.
Macluumaadka ku saabsan sheygaaga: Waa inaad soo koobtaa sidoo kale si sax ah waxaad iibineysaa. Haddii macaamilku awoodi waayo inuu kugula xiriiro, markaa isagu / iyadu way soo kaban karaan. Awood u siinta isdhexgalka isticmaalaha oo lagu daro markhaatiyaalku waxay caawin weyn u noqon kartaa ganacsigaaga.
Ku darista xalal farsamo oo kala duwan meheraddaada ayaa muujineysa macaamiisha suurtagalka ah, halista shirkaddaada. Sidaa darteed, si aad u dhadhamiso macaanka guusha waa inaad lahaataa degel aad u qaabeysan oo aad adigu iska leedahay. Waad ku xakameyn kartaa boggaaga waxaadna u dhaqaaqi kartaa martigaliye web kale wakhti kasta adigoon luminin waxyaabahaaga.
Horumarinta Websiteka ayaa kaa caawin doona inaad si dhakhso leh u bilowdo ganacsigaaga, laakiin waxaa jira dad yar, oo ka dib markii naqshadeynta Websaydhadu maamuli kari waayeen inay soo saaraan taraafiko badan. In kasta oo, tirakoobyadu sheegaan in 88% adeegsadayaashu aysan ku sii hayn doonin boggaaga khibrad xun ka dib. Tani way dhici kartaa, haddii aad maamusho isla degel websaydh ah. Sida beddelaadda websaydhka isbeddellada waxay sidoo kale u baahan tahay dib-u-habeyn loogu talagalay beddelaadda dijitaalka.
Maxay Muhiim Ugu Tahay In Dib U Habeyn Loo Sameeyo Websaydh?
Waxaan u dhiseynaa websaydhka si aan u helno kalsooni iyo si aan u kasbano dakhli badan. Websaydhkaagu si wanaagsan ayuu wax u qaban karayay, laakiin si aad u siiso adeegsadaha khibrad fiican oo aad u ilaaliso inay soo noqdaan waxaad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso websaydhkaaga Bixinta xaqiiqdaada, iyo markhaatifurku waa siyaabo aad u wanaagsan oo loogu xiro isticmaaleyaasha daacadda u ah websaydhkaaga. Waxaan la wadaagi doonnaa stats maskaxda ka fikiraya, oo aad u baahan tahay inaad ogaato Isbadal digital ah:
Tartanka sii kordhaya, 83% ganacsigu wuxuu ka faa'iideystey degel ka badan kuwa aan lahayn midkood.
Iyadoo dib-u-habeyn loogu sameynayo Websaydhka, 40% meheradaha yaryar ee ganacsiga ayaa hagaajiyay khibradaha macaamiisha.
Si loo abuuro hoggaanno badan, 72% ururradu waxay adeegsadaan istiraatiijiyad suuqa si loo xisaabiyo ROI (Return On Investment) oo qaata 1.6 jeer ka sarreysa tirada.
SLA (Heshiiska Heerka Adeegga) waa istiraatiijiyadda suuqa ugu wax ku oolka badan ee websaydhkaaga oo ay oggolaadeen 85% shirkadaha.
Ku darista waxyaabaha is-dhexgalka leh, fiidiyowyada bogga soo degitaanka ee boggaaga inta lagu guda jiro dib-u-habeynta waxay kordhin doontaa hoggaamiyeyaasha 86%.
Dayacista qayb ka mid ah websaydhkaagu waxay saameyn ku yeelan kartaa jiilkaaga taraafikada, oo aad u baahan tahay inaad jaangooyo u dhigto. Wax ka beddelka boggaaga waqti ka waqti, hubinta xiriiriyeyaasha jaban iyo dib u wareejinta bogagga bogga saxda ah waxay dheereyn kartaa shirkadda cimri dhererkeeda.
Sababaha dhagarta u gali doona dib u habeynta degel
Isbedelka Dijital ah, xeeladaha suuqgeynta ayaa door muhiim ah ka ciyaara. Tan iyo markii, ururada oo dhami waxay ka shaqeeyaan ujeedada ah soo saarista iibka, isbedelka hogaaminta. Ku cusbooneysiinta degellada aaladaha teknolojiyadda ee ugu dambeeya waxay ka ilaalin doontaa degelkaaga mid firfircoon dabeecadda. Isdhexgalka macaamiisha ayaa kaa caawin doona inaad fahanto godadka godadka si aad ugu hagaajiso boggaaga adoo ururinaya jawaab celin. Soo ururi xogta shuruudaha isticmaalaha iyo isku dhafka nashqadaha cusub ayaa laga yaabaa inay gacan ka geystaan ​​helitaanka culeys wanaagsan. Sidaa darteed, waad iska hubin kartaa sababaha wax ku oolka ah ee aad ugu baahan tahay dib u habeynta boggaaga.
Markaad siiso isticmaale macluumaadka saxda ah isagu / iyadu waxay ku raadineysaa qaab muuqaal soo jiidasho leh waxaad u maleyneysaa inaad isticmaaleyso isticmaaleyaasha. Sidoo kale sameynta websaydhkaaga, jawaabta degdegga ahi waxay yeelan doontaa beddelaad wanaagsan oo soo saarta UX.
Isticmaalka iyo Muuqaalka Sumadda:
Kawaran haddii aad sameysato degel aan awoodin inuu daboolo adeegyada aad siiso dadka isticmaala? Markaad isku waafajiso baahiyaha isticmaaleyaasha hadafyo istiraatiiji ah oo aad siiso fudeyd ay ku galaan shabakadda, waxaad helaysaa jawaabo deg deg ah.
La jaanqaadi kara Qalabka Webka Cusub:
Ku darida astaamaha iyo aaladaha cusub shabakadaada kuma filna. Si loo hagaajiyo khibrada isticmaale, waa lagama maarmaan in lala yeesho barnaamijyada dibedda. Waxaan u baahanahay degel la jaan qaadi kara teknoolojiyada ugu dambeysa ee gacan ka geysta sameynta, maareynta iyo tijaabinta xogta.
Isbedelka Dijital ah iyo Beddelka:
Ku darista qalabka CRM waa inuu dib-u-habeyn ku sameeyaa boggaaga adoo hagaajinaya waxqabadkiisa. Ka fogaanshaha adeegsiga xayeysiisyo badan oo pop-up ah, ku darista boggag wargalineed iyo maqaallo ayaa abuuraya aragti wanaagsan iyo sabab lagu sii hayo websaydhkaaga.
Lagu heli karo kombuyutarka iyo mobilada si fudud:
Ma ogtahay, inaad marin u hesho internet-ka seddex meelood meel isticmaalayaasha casriga ah? Sidaa darteed, waxay doorbidaan degel laga heli karo meel kasta oo qalab kasta ah. Websaydhkaagu waa inuu ahaadaa mid mobiil loogu talagalay adeegsadaha si uu u helo macluumaad si habsami leh.
Rabitaanka kobaca muddada-dheer ee waxtarka leh ee ganacsiga khadka tooska ah waa suurtagal haddii aad sii waddo cusbooneysiinta boggaaga. Ku shubista websaydhkaaga naqshado cusub iyo tijaabinta fikradaha, isku dhafka qalabka, ilaalinta shuruudaha isticmaalaha xagga hore ee maskaxda ayaa kaa caawin doonta beddelaad. Isdhexgalka macaamiisha ayaa horumarin doona horumarka websaydhka iyo sidoo kale ganacsigaaga khadka tooska ah oo aad u soo saar badan.
Tags: horumarintahorumarinta Webqaabeynta boggaisbeddellada naqshadeynta websaydhka
Ashley Marsh waa qoraa Sare- Maan Softwares Inc. Waxay la jirtay shirkaddan afartii sano ee la soo dhaafay. Waxay ku takhasustay nooca qoraalka farsamada gaar ahaan horumarinta mobilada, naqshadeynta websaydhka, iyo, tiknoolajiyada ugu dambeeyay. Sida ay sheegtay, waxay u ahayd soo-gaadhis weyn iyada maalin kasta tiknoolajiyadda ayaa is cusboonaysiinaysa taas oo keenaysa fikrado cusub oo maalin walba ka dhigaya mid cusub.